ငါလိုဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီ ကျွန်တော်ကူညီနိုင်၊ပေး: သင့်ရဲ့ပျမ်းမျှလစဉ်ဝင်ငွေထက်မပို ၁၂၅ တရားဝင်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရပ်တည်;သို့မဟုတ် သင်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊ကျမတို့မအကူအညီပေးရန်တရားစွဲဆိုနှင့်ဆက်စပ်သောယာဉ်အသွားအလာယာဉ်မတော်တဆ။ ငါတို့သည်လည်းမှာပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်း။ ကတည်းကကျနော်တို့အလွန်ကန့်သတ်ဝန်ထမ်းများ၊ကျနော်တို့ကမကူညီနိုငျလူတိုင်းလိုအပ်သောသူ။ ထပ္မံ၍အနီးရုံး၏ကုမ္ပဏီအထွက်ရှာဖို့ဆိုရင်ငါတို့သည်သင်တို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်အမှု။ သင်သည်မကျင့်လျှင်အဂၤလိပ္စကားကိုေခၚဆိုပါ၊၎ကဖုန္းနံပါတ္။ နောက်အချက်တစ်ခုလုပ်မည္တွင်သူတို့၏ဇာတိဘာသာ။ ကျနော်တို့အခေါ်ကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာအသံနိုင်ပါသည်အတိအကျမဂၢဇင္း၊ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းအများ၏ဆက်သွယ်ရေးအထောက်အကူပြုမိုကောင်းမွန်သောသင်အစေခံ။
ရှေ့နေလို သင်ကြားသိကြပေမည်၊အကြောင်းရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အကိုင်-ရှေ့နေ၊ရှေ့နေများ»အဖ»ဥပဒေကြောင်းအရ(သာ)ပြဿနာတွေကို၊ဒါပေမယ့်မသိစေခြင်းငှါအဘယ်သို့များအတွက်အထူးသဖြင့်သင်ကူညီအားဖြင့်ရှေ့နေ။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းငှါသင့်အသက်တာ၌သင်ဖို့ခဲ့ကြ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာရှေ့နေတစ်၊ဒါပေမဲ့၊ရှေ့နေများ၊နှင့်အသီးအသီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှုအလုပ်လုပ်ဖို့၊သင့်ပရိုဖိုင်း။ ဤအမှု၌၊ဤဆောင်းပါးရှင်းပြဖို့သင့်ကိုငါမြင်၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီရှေ့နေများကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်၊ငါ၏အမြင်၊သင်ကူညီသင့်တယ်အတွက်အဆုံးအဖြတ်ကို»ေဖာ္»ရှေ့နေများ၏အတွက်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့အမှု၊ဒါကြောင့်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကူညီပေးသူတွေဝင်ရောက်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏။ ဒီတော့၊ကြည့်ရအောင်-အမျိုးအစားများဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်နိုင်။ ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။
ရှေ့နေလို ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့အမျိုး၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီရနိုင်တဲ့ရှေ့နေနှင့်အခါအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုဆက်သွယ်မှသူ့ကို ဘယ်လိုမှအမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရမှတစ်ဦးအနေဖြင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နှင့်အတူရှေ့နေ. သငျသညျအဘယျသို့သိရန်လိုအပ်သည်၊နှင့်အတူမိဿသူ့ကိုလာ. ကံမကောင်းသဖြင့်၊အများအပြားနိုင်ငံသားများမှာလုံးဝသတိမထားမိ၏အနှစ်ဥပဒေနှင့်ဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးရှိသည်သူတို့ကိုလျှောက်ထားအတွက်လေ့ကျင့်။ လူအနည်းငယ်ကအကြောင်းစဉ်းစားဝယ်မုန့်ကိုတစ်လုံး၊သူသို့ဝင်သောအမှုစာချုပ်များရောင်းချခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ရောင်းချသူနှင့်အတူကြပါတယ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သောစည်းမျဉ်း။ လူခေါ်ဥပဒေကိုများသောအားဖြင့်သူတို့ရှိသည်လိမ်လည်ခဲ့မှာစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ငြင်းပြုပြင်ရန်အတွက်အာမခံအခါ၊သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေကြတယ်။ သို့သော်၊လျှင်အလေးအနက်ချဉ်းကပ်ဖို့နေ့စဉ်ကိစ္စများကို၊ရှေ့နေလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်များကြီးအစောပိုင်းကအမည်ရသည့်အခါသင်သာသွားကောက်ချက်ချရန်၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်စာချုပ်ဝယ်ယူရေးအတွက်အိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်စျေးကြီးများ၏ပြုပြင်မှု။ မီဆက်သွယ်ရှေ့နေတစ်ဦး၊ဒါကြောင့်အကြံပြုလိုသင်ယူဖို့သုံးရန်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊ကျနော်တို့အကြောင်းသိထားရပါမည်တစ်ဦးစကားပြောဆိုသည့်ရှေ့နေနှင့်အတူ-ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအရာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်အတူဆရာဝန်တစ်ဦး။ ပိုပြီးအချက်ဖုံးကွယ်၊ပိုခက်လေဖြစ်ရလိမ့်မည်မှရှေ့နေတစ်ဦးမှကာကွယ်၏။